Slackware: Sbopkg sy SlackBuilds, mametraka fonosana mora foana | Avy amin'ny Linux
DMoZ | | fampiharana, GNU / Linux, Tambajotra / seriver, Tutorials / Manuals / Tips
Mitohy amin'ireo andian-dahatsoratra izay manandrana manaparitaka an'io fizarana lehibe io, tonga ny fotoana anehoana izay avy amin'ny fomba fijeriko no fomba tsotra indrindra hametrahana fonosana ao anatiny Slackware, momba ny SlackBuilds ary fampiharana kely izay manamora anay izany fiainana bebe kokoa aza rehefa mitantana azy ireo, Sbopkg.
Tsara ny manamarika fa ity fitaovana ity TSY mamaha fiankinan-doha toy ny ankamaroan'ny fitaovana ho an'ny SlackwareNa izany aza, mety ho andraikitra zakaina izany, satria hiezaka ny hanazava izahay avy eo.
Inona ireo Slackbuilds?
Voalohany dia ilaina ny manonona fa ny fomba "nentim-paharazana" fametrahana fonosana ao Linux izy io dia manangona avy amin'ny kaody loharano, izay amin'ny ankapobeny dia mety miasa nefa mety hiseho ho olana amin'ny ho avy, ohatra, rehefa manandrana manavao ny fonosana efa napetraka ary hadinon'ny mpitantana ny rafitra (adinonao) ny soatoavina fanangonana.
Mba hialana amin'ity karazana tsy fanelingelenana ao Slackware ny fanapaha-kevitra dia nampiasaina a teny hametrahana automatique ny fizotry ny fametrahana, amin'ny fomba hametrahana kinova vaovao isaky ny fonosana, ny hany sisa ataonao dia ny manova ny miovaova izay mampahafantatra ny rafitra momba ny kinova an'io fonosana io.
Ho an'ity fanangonana ny soratra nantsoina izy ireo SlackBuilds ary izy ireo no tokony hiteny ny kely indrindra fitahiana nalefan'ny mahery indrindra God Tux ho an'ireo mpampiasa rehetra izay nisaintsaina nandritra ny herinandro maro mba hahatratra ny haavon'ny fahazavana nahatonga azy ireo hampiasa Slackware (Nilaza ny reniko fa manana eritreritra betsaka aho) ...
Ny fomba fampiasana azy ireo dia tena tsotra, voalohany mankany amin'ny pejy izay misy ny fanangonana feno fonosana Slackbuilds izahay, momba ny http://slackbuilds.org/.
ary mampiasa ny motera fikarohana misy azy izahay mba hahitana ireo fonosana ilainay, ohatra andao hikaroka "Flash", noho izany dia hahazo lisitry ny fonosana mifanentana amin'ny karoka izahay.
Amin'ity tranga ity dia hisafidy ny hametraka «flash-player-plugin".
Ho azontsika fampahalalana momba ny fonosana izay nofidintsika, ohatra, ny kinova-ny, famaritana fohy, ny pejy ofisialy, rohy fisintomana ofisialy avy aiza no hahazoanay ny kaody loharano ao amin'ireo rafitrano misy azy ary rohy fampidinana mankany amin'ny SlackBuild iza no hikarakara ny fizotry ny fametrahana.
Nosintominay ny loharano loharano ary ny SlackBuild.
Mamoaka izahay el SlackBuild.
Mihetsika isika el loharano loharano (tsy voafehy) ao anatin'ny lahatahiry ny SlackBuild izay vao nongotantsika.
Manokatra izahay ny hampionona ao amin'ny lahatahiry an'ny SlackBuild.
ankehitriny hamorona ny fonosana izahay azo apetraka, fa ilaina aloha Hiditra como el faka.
Para maritrano de 32 potika manoratra «. /flash-player-plugin.SlackBuild ».
Para maritrano de 64 potika izahay dia manoratra «ARCH = x86_64 . /flash-player-plugin.SlackBuild ».
Ny fizotry ny fonosana ary raha nandeha tsara ny zava-drehetra tamin'ny farany dia omeny antsika ny lalana aiza ny fonosana noforonina, amin'ity tranga ity dia "/tmp/flash-player-plugin-11.2.202.243-x86_64-1_SBo.tgz".
Esory izao instalar el fonosana amin'ny alàlan'ny Fitaovana de Slackware manome antsika an'io asa io (amin'ny fanoratana any aoriana, ireo fitaovana ireo dia horesahina amin'ny fomba lalina), Izy io dia momba installpkg.
Manoratra izahay "Installpkg /tmp/flash-player-plugin-11.2.202.243-x86_64-1_SBo.tgz".
Ny fizotry ny fametrahana ary raha nandeha tsara ny zava-drehetra, dia milaza amintsika izany napetraka ny fonosana.
Araka ny hita, ny fizotrany tsy izany toy izany sarotra, na dia eny aza afaka mivily kely mankaleo Raha ny fitsipika, ohatra, inona no mitranga raha toa ka mila be dia be ny fonosana tiantsika hapetraka miankina, ny fomba fampidinana ny fisintomana tsirairay SlackBuild ary ny tsirairay Source mety handraisana fanapahan-kevitra mihoatra ny iray handao ny fizarana izany.
Soa ihany manisa isika miaraka amin'ny Fitaovana izay afaka manamora ny asan'ny instalar fampiharana, na dia manizingizina aza aho, aza mamaha ny fiankinan-doha, "Sbopkg".
Sbopkg, dia a Fitaovana en Tsipika baiko de izany sincronizada miaraka amin'ny repository de Slackbuilds de slackbuilds.org (SBo), amin'ny fomba izay raha te-hametraka fonosana isika dia tsy maintsy mankany aloha slackbuilds.org hanamarina raha misy izany, ary koa hanamarina ny anarany marina sy ny fiankinan-doha ilaina izany.
Fampiasana ny ejemplo fametrahana Teo aloha, "Flash-player-plugin", ho hitantsika ny tsy fitovizany.
Ampy fotsiny ANDININ- "Sbopkg-flash-player-plugin".
Fanamarihana: NO ilaina ny misintomantsika na ny SlackBuild tsy ny Source, satria io fitaovana io no miandraikitra ny zava-drehetra.
manamafy izahay inona no tiana hapetraka fanoratana "P".
Ary ho azontsika ny fonosana ya nametraka na inona na inona maritrano misy antsika.
Fanamarihana: taloha tsy maintsy manana nametraka sbopkg (Hetsika amin'ny antsipiriany etsy ambany), ity fampiharana ity dia ampiasaina ao amin'ny console ary tsy miraharaha izay lahatahiry misy antsika.
INDRO NY SBOPKG
Para instalar sbopkg tsy maintsy mankany amin'ny pejy ofisialiny isika marary mitsika y azoko
indray mandeha Navoaka.
Manokatra izahay ny hampionona ao amin'io lahatahiry io ary manoratra izahay "Installpkg sbopkg-0.36.0-noarch-1_cng.tgz" (Aza adino izany tokony to be como el faka)
Ary efa manana isika nametraka sbopkg.
Raha vao nametraka sbopkg, ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia synchronize su base de tahirin-kevitra miaraka amin'ny an'ny slackbuilds.org, ho an'ity manoratra izahay "Sbopkg -r".
indray mandeha vita ny la fotoana, vonona izahay instalar misy fonosana misy amin'ny alàlan'ny sbopkg.
Manatanteraka ny mitondra fiara de entana ny alalan ' sbopkg manana isika de los safidy, ny kilasika -dalana, de didy na avy amin'i sbopkg ao amin'ny interface tsara ncurses.
Efa hita tao amin'ny ejemplo Teo aloha ny lalan'ny instalar un fonosana amin'ny sbopkg en -dalana, de didy, fa ahoana kosa raha tiantsika instalar un fonosana de mitaky miankina, hialana amin'ny fametrahana ny fonosana tsirairay tsy miankina, azonay atao ny mamaritra manokana ireo fonosana hapetraka ao anatiny teny nalaina indroa («).
Ohatra, instalar "Supertuxkart" dia mila fiankinan-doha roa, "OpenAL" ary "irrlicht".
Ka raha tokony hanoratra fonosana tsirairay ny misaraka, dia manoratra tsipika tokana 'sbopkg -i "OpenAL irrlicht supertuxkart"' izahay.
Fanamarihana: Andao hojerentsika ny fisarahan'ny fonosana tsirairay habaka ary ny setin'izy ireo dia mihidy anaty teny roa («).
Ka hahazo supertuxkart miaraka aminy isika miankina nandrakotra.
Mba hahazoana iray lisitra feno amin'ny safidy ny fikirakirana fonosana mamela antsika sbopkg, ampy amin'ny ANDININ- amin'ny console lehilahy sbopkg.
La safidy hafa manolotra izany sbopkg, amin'ny alàlan'ny fampiasana ny interface-ny ncurses. Raha te hiditra azy io, fotsiny ANDININ- "Sbopkg" ao amin'ny console anay.
Inona hanomboka una interface tsara izay azontsika jerena dia ananantsika safidy hahafahantsika izany tahiry fampirimana, instalar, esory, actualizar fonosana ankoatry ny hafa, ny fampiasana azy dia tena tsotra satria ampy ny mifantina ireo safidy ilaintsika.
Amin'ny ankapobeny, io no fomba ahafahantsika manana rafitra Slackware tena zaka, raha atambatra ny isan'ny fonosana misy amin'ny fametrahana ny Slackware ary ireo azo alaina ao SlackBuilds hahazo lisitra fonosana lava be ho an'ity fizarana lehibe ity izahay.
Tsy misy fialantsiny intsony, andao hampiasa slackware !!! ...
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Slackware: Sbopkg sy SlackBuilds, mametraka mora foana ny fonosana
Mahaliana tokoa hehehe. Te-hanandrana an'ity distro ity foana aho, toa tsara izany, saingy tsy apetrako amin'ny tsotra fa tsy tiako ny sary famantarana azy, toa an'i Debian sy Gentoo ihany. Ankasitrahana ireo fandraisana anjara ireo. Ianao no Slackware mitovy amin'i Perseus miaraka amin'i Fedora, Elav miaraka amin'i Debian, ary KZKG ^ Gaara miaraka amin'i Arch XD.
Rehefa omenao ny fotoana dia ho fantatrao fa ny fisehoan'ny logo no kely indrindra aminy 😉 ...
Hehehe mazava ho azy. Hotsapaiko amin'ny vm izany ary avy eo amin'ny hardware mba hahitako ny fomba fiasan'izy io.
Hmm amin'ity, tsy nampaniry ahy hanandramana slackware intsony izany. Hahahaha Izaho dia manana ny toe-tsain'ny rafitry ny fiasa tsy maintsy:
Simple, Fast, Stable ary rindrambaiko marobe.
Aiza no ahazoako aina amin'ny Arch mampiasa pacman: D. Na dia nahatonga ahy te hiverina tany Fedora aza izany: D.
«Ny fomba" nentim-paharazana "hametrahana fonosana ao amin'ny Linux dia ny fanangonana avy amin'ny kaody loharano» mmm dia nampahatsiahy ahy ny momba ny gentoo, izay atambatra ny zava-drehetra ary tiako kokoa ny portage 😀
Slackware dia Tsotra, Haingam-pandeha, milamina ary miaraka amina rindrambaiko LOBA toa izay lazaiko ao anaty naoty ...
Marina, mahazo aina i pacman 😉 ...
Ny tiako holazaina dia ny fomba nentim-paharazana ao amin'ny Linux, noho izany amin'ny Slackware sy ny fizarana hafa rehetra ...
Raha mamaky ilay naoty ianao dia mahatsapa fa tsy mila manangona na inona na inona, dia hikarakara ny sbopkg rehetra ...
Ary nametraka indray ny andohalambo aho, nahita bibikely. Tsy tiako intsony ny mampiasa andohalambo amin'ireo lesoka ireo.
Cores 2 ihany no hitany (manana 4 aho)
Olana ara-pahasalamana, miaraka amin'ny pulseaudio tsy misy.
Ireo ihany hatreto.
Te handeha distro marin-toerana aho.
Slackware = Milamina + "ankehitriny"
Debian = Milamina (saingy tsy avelako hametraka izany, hoy ny isosa rehetra sintomiko: Tsy hametraka ny modules izy io ary mety hisy fiantraikany amin'ny fametrahana azy)
Amin'ny fomba farany, miverina mandresy aho.
Slackware tsy manana kernel pae ???
Raha kik1n, manana ny fanohanan'ny PAE ...
Tsy dia tsotra izany, milamina ny zava-drehetra miaraka amin'ireo fonosana, saingy tsy hitako ny fahasoavana hanao izany rehetra izany rehefa afaka mametraka distro miaraka amin'ny manager manager izay mamaha ny fiankinan-doha ary dia izay, hoy aho, satria ny marina dia izaho aza mahita tombony amin'izany tsy misy fiankinan-doha, angamba mamonjy habaka megabytes roa ianao, fa inona no fantatro.
Mijanona miaraka amin'i Arch koa aho.
Ankehitriny dia aleoko im-arivo ny Ubuntu raha tsy distro hafa. Saika nandalo ny ankamaroan'ny Linux aho, avy amin'ny kinova miorina, mihodina ary manandrana.
Eny, tsara ny Ubuntu, ratsy loatra ny kanelina sy ny Mate dia tsy mandeha tsara ary tsy mandeha rà izany, raha izany dia aleoko mihoatra ny Arch na Fedora, fa he, angamba raha avelan'izy ireo hamoaka izany hoy izy ireo. dia hanatsara ihany koa amin'ireo lafiny ireo. Na eo aza izany, mbola io no safidiko fahatelo.
Na dia, izao aza aho dia liana tamin'ny disro izay itambaran'ny zavatra, hahalalana ary satria milaza izy ireo fa haingana kokoa, dia maharary azy ireo izany, fa ny tena marina dia tsy afaka nanangona na inona na inona mihitsy aho, koa ampio aho hivoaka any.
Raha ny tokony ho izy, moa ve mora kokoa aminao ny manamboatra trano milamina na tsy miova firy amin'ny fomba fananganana nentim-paharazana?
Slackware dia efa mitondra ny manager manager azy izay pkgtool, Slackbuilds dia ho an'ny programa izay tsy ao anatin'ny iray ofisialy tonga amin'ny DVD fametrahana.
Ary nanandrana ny Arch Linux tamina abs aho, saingy tsy nety tsara izany, marobe ny fonosana izay tsy nety nanangona azy, fa raha tsy izany dia fomba iray azo ampiasaina na tsy dia mahomby toy ny fampiasana sbopkg.
Tiako ny fanazavanao | tadidio fa misy loharano hafa, na ofisialy na tsy ofisialy, fa mitovy ihany ny fametrahana rindrambaiko amin'ny «slack» | Tsy mbola mila manangona na inona na inona amin'ny slackware aho. mahafaly
Eny tokoa, saika ny zavatra rehetra ilaiko dia hita ho fonosana ofisialy na hita ho SlackBuild ...
DMoZ, misaotra anao tamin'ny fampahafantarana momba ny Slackware, fizarana milamina sy haingana, miaraka amin'ny rindrambaiko tsara, nohavaozina ihany koa, ary minoa ahy fa mora ampiasaina, saingy ny hanatsoahana izany fehiny izany no fomba tokana dia ny fametrahana azy sy ny fampiasana ny fitaovany rehetra.
Ho ela velona Slack.
Miombon-kevitra tanteraka aminao aho Andriamatoa Linux ...
Efa nataoko fanamby manokana io, mba hanomezana vaovao ho an'ny vondrom-piarahamonina momba ity distro amin'ny fiteninay ity, ary aiza koa no hanaovana azy io noho ity tranokala mahafinaritra ity =) ...
Fandraisana anjara tena tsara DMoZ, mariho ihany koa fa misy pejy hafa ahafahanao mahita SlackBuilds toy ny an'ny mpitahiry ilay kinova 64-bit Eric «AlienBOB» Hameleers http://slackware.com/~alien/slackbuilds/ na ny pejy italiana http://www.slacky.eu/. Fotoana vitsy lasa izay dia namorona fonosana roa izay ao amin'ny SlackBuilds.org aho izao, raha liana hianatra manamboatra entana sy mila fanampiana ianao dia aza misalasala manontany 😉
Tsaroako fa ny fotoana farany nanamarihako ireo Alien SBs dia fonosana efa antitra izy ireo, ary tamin'ny moramora no nitsidihako azy mba hahazoana efa feno fonosana sy vonona hapetraka miaraka amin'ny installpkg ...
Homeko hevitra hafa ianao ary ho avy eto hizara ny valiny ...
Misaotra Proper, raha te hahalala ny fomba fanaovana an'io aho, raha vantany vao manana fotoana hanaovana famotopotorana aho dia hanontany anao raha sendra sendra zavatra aho ...
Mihobia !! ...
Mety, mpianatra mahatoky anao aho, raha ampianarinao manangona entana amin'ny Slackware izahay.
Toa milay izany ary raha ny lazainao dia toa tsy sarotra izany ...
Notsapaiko izany tokony ho 3 taona lasa izay, nanome ahy fahatsapana filaminana izany. Na dia ny fiankinan-doha aza dia namerina ahy ...
Ary raha, araka ny efa noresahinao, dia misy fonosana maro manamora ny fiainanao nefa tsy mila manangona, fa mieritreritra aho fa ny mampiavaka azy dia ny distro taloha ary noho izany, ary koa ny arko, dia ny mampiasa pacman sy ny toerana anaovana azy ofisialy malaina ny azy no manangona. Manome anao fahalalana izany (marina ihany koa fa tsy isika rehetra no manana fotoana na maniry hanomboka hanoratra), saingy heveriko fa ny filozofia slackware dia manakaiky kokoa ny filozofia amin'ny tontolo bsd noho ny tontolon'ny linux. Izay manambatra sy mijery fiankinan-doha ankoatry ny zavatra hafa dia zava-dehibe.
Marina fa tena tsara fa misy fitaovana manatsotra ny fiainana ho an'ny mpampiasa, saingy mieritreritra aho fa tsy mifanaraka amin'ny filozofian'izy ireo izany. Ary amin'ny maha distro KISS tsara azy, ny azy dia ny manangona sy mamela ireo takelaka hahita ireo fiankinan-doha (farafaharatsiny voalohany).
Heveriko fa ny fananana fonosana lavanila dia mampiavaka azy, ary ny olona tia Linux rehetra dia tokony hanandrana ireo disro efatra izay manome lanja indrindra ny linux ary nanome zavatra: Debian, Slackware, Arch ary Gentoo
Miala tsiny amin'ny fanamarihako lava, nanitatra mihoatra ny tokony ho izy aho.
Amin'izany rehetra izany dia ankasitrahana ny fandraisanao lesona amin'ny Slackware ary betsaka kokoa, amin'ny fahalalana bebe kokoa fa vitsy dia vitsy ny amin'ny teny Espaniola eto amin'ny Internet. Ka ankasitrahana ihany koa ny nanaovanao azy ho mahafinaritra sy tsotra.
Araka ny nolazaiko, Slackware dia tena KISS, ny zavatra miankina aminy dia tsy sarotra, mankany amin'ny SlackBuilds.org ianao ary eo no manamarika ireo fiankinan-doha mila fonosana x, ny sisa ataonao dia ny maka tahaka ny anaran'ny fiankinan-doha ary ao amin'ny console. :
#sbopkg -i "dep1 dep2 dep3 dep4 depXNUMX package"
Ary voila, ny fonosana dia napetraka miaraka amin'ireo fiankinan-doha voasarona ...
Amin'ny ankapobeny dia mora be ...
Malahelo anao aho Fedora, iray amin'ireo izay mandray anjara betsaka indrindra.
Na izany na tsy izany, tsy mila manangona, slackbuilds ianao, ary heveriko fa misy fonosana .txz na .tgz vonona hametraka, saingy tsy mahavaha fiankinan-doha izany. Raha te-hanangona ianao dia makà LFS na apetaho Gentoo, ao amin'ny Slackware dia azonao atao ihany koa ny manangona izany, saingy mitovy na tsara kokoa aza ny mampiasa distro.
Ah aza manao hadisoana, ny slackbuilds dia tsy maintsy atambatra, fa ny valiny dia fonosana vonona hapetraka
Ankasitrahana ny lahatsoratra. Miaraka amin'ny sbopkg dia toa zakaina ny fiankinan-doha. Izay no zavatra tsy tiako indrindra tamin'ny slackware. Ny marina dia amin'izao fotoana izao dia tsy mino aho fa mampiasa azy. Tena mahazo aina amin'ny arofanina aho ary manana zavatra hafa eny an-tanako, saingy hoheveriko ho toy ny safidy amin'ny ho avy io.
Tsy misy zavatra tokony hisaorana =) ...
Eny, hita fa tena zakaina tokoa ...
Ho ela velona Slackware, ho ela Arch, ho ela velona Linux !!! ...
Slackware dia distro tena tsotra, ny Unix be indrindra an'ny Linux. Ny olany lehibe ankehitriny dia ny Unix be loatra, vidiny iray aloany hatramin'ny BSD ary na i Gentoo aza. Ity lohahevitra fitantanana fiankinan-doha ity dia manome tsiro Unix mahery, saingy toy ny zavatra hafa rehetra, tiako ny fromazy manga ary ekeko fa tsy zavatra tian'olona be loatra izany.
Na dia marobe aza ireo mpandefa zana-tsipìka, ny mpanentana lehibe indrindra an'ny KISS dia Slackware, Lilo, Sys V, ary maro ny fomba BSD na aiza na aiza. Raha fintinina dia tototra amin'ny fahatsorana izy io. Betsaka no mety mieritreritra fa ny fiainana taloha dia mieritreritra aho fa olana "marika" izy io, zavatra iray na hafa izany, ao anatin'ny KISS dia tsy misy ifotony.
Mampiasa ny lahimatoan'ny Slackware, openSUSE aho izao, ary na dia tsy misy itovizany intsony aza, raha jerentsika ny boky Slackware dia ho hitantsika fa mbola misy ny sasany amin'ireo génétika ary mampifaly ahy izany.
DMoZ: chapó, izay ataonao dia tokony eken'ny UNESCO ho fananana tsy azo zakan'ny olombelona. 🙂
= D Krel namako !!! ...
Miombon-kevitra aminao aho, Slackware no fizarana Unix be indrindra misy (tsara, farafaharatsiny ireo nampiasako, ary nampiasa xD maro aho) ...
Betsaka amin'ireto lahatsoratra ireto no misaotra an'i Krel, ary araka ny nampanantenainy, ny fanekena dia amin'ny faran'ny lahatsoratra teo aloha ...
Eny, hitako io, nanaraka anao aho. 🙂 Misaotra. Na izany aza, anao ny trosa rehetra, dia manao asa mahatalanjona amin'ireo lahatsoratra ianao.
= D Misaotra !!! ...
Indray andro any dia tokony hanome voninahitra anay ianao miaraka amin'ireo naoty nomen'ireto lafiny ireto ...
Lahatsoratra tsara ho an'ireo izay manam-potoana sy fahalalana nefa tsy mampaninona anao ny manelingelina sy mamerina mametraka raha misy tsy mety, izaho amin'ny taonako (izay manavao ny taona iray hafa aho izao) 😉 Nanomboka nampiasa Linux aho taorian'ny androm-piainan'ny W $ aleoko tsy manasarotra ny fotoana, fa ho an'ireo izay manao Linux sy S, O, ny fiainany dia tsy maintsy ho mofomamy tsara tarehy voaravaka tsara ity fanazavana ity.
Ny antony manosika ny hamerina amin'ny laoniny ny fiarahamonina izay ataony ...
Noho ny antony hafahafa dia mahatsiaro ho very kokoa aho noho ny rehefa mamaky ilay pacman sy yaourt = O fipetrahana fametrahana ... Manana zavatra betsaka hianarana aho lol
Avy eo tsy maintsy averinao vakina ilay lahatsoratra xD ...
Tsotra kokoa noho ny tena izy ny zava-misy, ny zavatra rehetra dia ampy hampiharana azy ...
Tena tsara, mendri-piderana ny asa fanaparitahana ataonareo.
Tohizo izany, arahaba.
= D Misaotra rahalah !!! ...
Tokony hiaiky aho fa tena nanampy ahy ny bilaoginao ary nisy fiatraikany lehibe tamin'ny fanapahako hevitra tamin'ny Slackware, izay tiako indrindra =)…
mihidy mafy dia hoy izy:
Slackware no distro Linux madio indrindra amin'ny hevitro fa tsy misy add-ons. Tsy maty tsy nisy hatrizay izy io fa manome fahalalahana ny mpampiasa hanao rafitra manokana. Tsy distro ho an'ireo izay matory ao amin'ny Laureles izany. Rafitra tena izy io ho an'ireo skotisma izay te hianatra tsikelikely ny zava-drehetra. Mpampiasa maro no tsy mankasitraka izany. Io ilay distro izay misy amboarina tsara am-polony. Koa satria be loatra ny safidy eto amin'ny tontolon'ny Linux noho ny tanjona mitovy, Slackware dia manome topy maso OS tsotra sy tsotra. Ho an'ireo programmer na mpikaroka teknolojia lalindalina.
Miarahaba an'i DMoZ sy ny sakaizan'ny Slackware rehetra !!!
Caramba !!! mahagaga tokoa ity vitsika kely antsoina hoe "sbopkg" ity !!!
Izay no manao ny zavatra rehetra !!!
Omaly alina aho dia nanomboka nametraka Chromium 24.0 (tsy nampiasa "sbopkg"), izay iray ihany ny fiankinan-doha, ary tena mahay mandanjalanja aho, nampidina ireo loharano sy SlackBuilds roa (Chromium sy fiankinan-doha) ary tsy maintsy niaritra tamim-paharetana aho, satria ity kinova Chromium ity dia mitaky faharetana.
Ary tadidiko fa nila nametraka VLC, mpilalao horonantsary tiako indrindra aho ... Ary walaaa! Izy io dia manana fiankinan-doha 23, izay manome 48 fampidinana an-tanana (amin'ny loharano sy ny SlackBuilds ihany) ankoatry ny fizotra tafiditra amin'ny fametrahana. Ufff !!! Kivy aho, TSY mandà izany. Na izany aza, nanomana kafe avy tany Colombia malalako aho ary nanomboka niasa.
Nandritra ny fisintomako ireo fiankinan-doha dia nijery ity lesona ity aho sy ilay fampiharana antsoina hoe "sbopkg" -simple, kely, tsy manan-tsiny, «miafina» fa MIASA, toy ny vitsika iray ... miasa miaraka amin'ireo fiankinan-doha rehetra ireo ary mahafinaritra tokoa !!! Nisotro ny kafe aho ary vita irery izany !!! Gaga aho, satria tsy mbola nahita an'io tao amin'ny Slackware aho.
Tiako hatrany ity distro ity.
Ie, tiako sbopkg, tena lehibe.
Misy fomba hafa koa hametrahana ireo fonosana izay tiako indrindra.
Mahagaga ny sbopkg, mora be ny mametraka fonosana miaraka amin'ity fitaovana ity, na miankina amin'ny firy na firy ny fonosana.
Mikasika ny chromium, tena marina ny lazainao, raha hametraka an'ity kinova ity ianao dia tsy maintsy miaritra faharetana be ary ho an'ny tsiriko dia tsy mendrika ny hanana firefox amin'ny toerana misy anao.
Salama, na dia efa nampiasa linux nandritra ny taona maro aza aho, vao sambany nametraka slackware aho. Manomboka tiako ilay izy fa misy zavatra manapotika ny lohako, jereo raha afaka manampy ahy ianao ...
Mba hametrahana Vlc dia alefako izao manaraka izao:
sbopkg -i "a52dec faad2 twolame lua portaudio libavc1394 libdca libdvbpsi libdvdcss libdvdnav libmatroska libmodplug libmpeg2 libshout libupnp schroedinger vcdimager faac musepack-tools ffmpeg speex libasscdccbc livecn
Mitranga izany fa misy ny fiankinan-doha manome ahy hadisoana fametrahana, na satria misy kinova taloha ny fiankinan-doha ary mbola ilaina kokoa ny ankehitriny, na satria misy tranomboky .h tsy hita toy ny libmastroska.
Isaky ny mahazo karazana lesoka ianao dia mila mametraka ny fiankinan-doha tapaka amin'ny terminal hafa ary manangona ny zava-drehetra ho an'ny vlc.
Diso zavatra ataoko? Afaka manampy ahy ve ianao?
Izay no mahatonga ahy tsy miaraka amin'ny Slackware intsony.
Manampy ity torolàlana ity ary ampihariko amina fonosana marobe izy io, tena mandeha tsara.
Manoro hevitra anao aho ry gentoo tsara kokoa.
Fa maninona ianao no mamporisika ny gentoo hampiasa ny kamo? Niezaka nanandrana an'i Sabayon indray mandeha aho fa ny mahaliana dia miadana kokoa ny rafitra noho ny ubuntu na ny mint linux ...
Tsia, misy ranomasina misy fahasamihafana eo amin'ny sabayon sy Gentoo.
Gentoo dia mihazakazaka in'arivony heny noho ny rafitra miasa rehetra (mety manitatra aho), saingy eny, haingana be.
Milamina kokoa noho ny debian sy ny kamo.
Vao avy niresaka tamin'ny plaza Tete momba ny gentoo sy ny zava-bitany aho.
Manantena aho fa afaka manampy anao io. 😀
Tsy izany ny tantara !!
Slackbuilds.org dia tranonkala iray izay manome script fananganana mitovy amin'ny slackware ofisialy. Ny fanomezana Slackbuilds dia tsy midika hoe loharano ofisialy io. Ity tranonkala ity dia tazomin'ny mpandray anjara ka indraindray dia misy ny fidinana indraindray ary lany ny fonosana nohavaozina isika. A Slackbuild dia script hamoronana fonosana vonona hapetraka ao amin'ny Slack build zavatra toa ny spec rpm, Misy mpamatsy Slackbuilds hafa, Slackbuilds.org dia manana teboka fanampiny satria na ny mpamorona Slackware aza dia misy eto. Ny fitantanana slackbuild dia tsy ny fampidinana ny kinovan'ny fonosana fotsiny ary miasa izy io, tsy maintsy misy ny dingana fampidirana ary izany rehetra izany, raha tsy mino ahy ianao dia zahao ny fampivoarana ny Slackbuilds.org.
Mpamboly dia hoy izy:
Mba hanaporofoana dia voalaza fa havana!
Mamaly an'i Rancher
LUIS ALBERTO. dia hoy izy:
Manomboka ny tontolon'ny Linux nametraka slackware aho satria efa namaky zavatra betsaka momba an'io OS io ary ny olako ankehitriny dia ny tsy ahafahako mametraka OpenOffice. Azafady mangataka fanampiana ary ahoana ny fizotry ny fametrahana. misaotra Azafady, manorata amin'ny mailako momba an'io lohahevitra io.
Valiny amin'i LUIS ALBERTO.
josAlz dia hoy izy:
Namonjy ahy ianao, nandany ahy ny mahita ny fomba fametrahana programa vaovao dia miasa mafy, teo am-baravarankely aho nametraka pendrive efijery manga, ny hany rafitra niasa dia ny slackware 14.2 fa ny antony hanohizako ny fianarana saika natsipiko tao anaty lamba famaohana hahaha, Misaotra!
Mamaly an'i josAlz
MacBird: lohahevitra ho an'ny xfce
Ahoana ny fampiasana Synaptic miaraka amin'ny fanohanan'ny GTK 3